Roobab khasaare ka geystay Galgaduud
Galgaduud 30 Apr, 2012Roobab watay dabaylo xooggan ayaa ka da`ay deegaanno ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, kuwaasoo ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah dadka ku nool deegaannada ay ku dhufteen roobabkaasi watay dabaylaha, iyadoo sidoo kale dabaylahaasi ay dumiyeen guryihi ay ku noolaayeen dadkaasi.
Deegaanka ay ku dhufteen roobabkaasi ay la socdeen dabeylaha oo lagu magacaabo Marjiicleey ayaa ah deegaan hoostaga degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana la sheegay in halkaasi ay ka dhaceen khasaarooyin ay geysteen dabaylahaasi. “Inta aan hubo illaa 65 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la soo gaarsiiyay xarunteenna caafimaadka ee ku taala Marjiicleey, sagaal ka mid ah waxaan ku samaynay qalliimo kala duwan, laba ruux oo ka mid ah dadkaasina xaaladdoodu waxay ahayd mid halis ah waana sii gudbinnay.” sidaa waxaa Raadiyo Ergo u sheegay Dr. Axmad Cali Maxamed oo isagu ah madaxa rugta caafimaadka ee deegaankaasi.
“Roobabkaani waxay dumiyeen ama ay qaadeen ku dhowaad illaa 400 oo guri, guryahaasi qaar waxaa ka duulay jiingadihii saarnaa kuwaasoo badi dadka dhaawacay, roobku wuxuu billowday qiyaastii markii aan ka soo baxnay salaaddii maqribka.” sidaa waxaa Ergo u sheegay guddoomiyaha deegaanka Marjiicleey Cabdi Axmad Xasan, isagoo intaasi ku daray in guryaha ka badbaaday roobka ay ka yar yihiin illaa 20 guri oo kaliya.
Dhinaca kale waxaa gurmad u fidiyay qoysaskii ay waxyeelladu ka soo gaartay roobabkaasi watay dabaylaha ee ku dhuftay deegaanka Marjiicleey maamulka degmada Guri ceel ee gobolka Galgaduud, guddoomiyaha garsoorka ee maamulka Ahlu sunna waljamaaca Sh. Siciid Sh Muxummed Sh. C/raxmaan oo isna u warramay Raadiyo Ergo ayaa sheegay in ay gurmad ay gaarsiiyeen halkaasi waloow uu sheegay in gurmadkaasi uusan ahayn mid dabooli kara baahidii ay qabeen dadkaasi wuxuuna sheegay in maamulku uu gaaray deegaanka, si ay u arkaan wixii ka dhacay halkaasi.
Guddoomiyaha deegaanka Marjiicleey ayaa ugu dambeyntii codsi u diray hay`adaha samafalka, isagoo ka codsaday inay gurmad la soo gaaraan qoysaska ay dhibaatadan soo gaartay.Si kastaba ha ahaatee roobab ay ku diirsadeen shacabka ku dhaqan deegaanno kala duwan oo ku yaalla gobolka Gal gaduud ayaa ka da`ay gobolka, xilli dadka deegaannadaasi ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo mareen abaaro adag oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo duunyada ku nool halkaasi.
Puntland oo furtay xarumo la dajiyo dhibbanayaasha daadadka
Roobabka oo burburiyey in ka badan 900 beerood oo muhiim u ahaa suuqyada Puntland
Waraysi aabbe lix carruur ah iyo hooyadood ku waayay duufaantii Puntland
Puntland oo sheegtay ilaa hadda 142 qof inay xaqiijiyeen inay ku dhinteen duufaanta
Waraysi: Sarkaal ka tirsan SWALIM oo ku sugan Eyl iyo qorshaha gargaarka ee hay'addaha
Waraysi ku saabsan duufaantu siday u saamaysay tuulada Garmaal oo ku dhow Bayla
Roobab iyo dabeylo is wata oo 100 qof ku dilay Puntland
Fatahaadda webigu ka geystay gobolka Shabeellaha Hoose
Roobab Mahiigaan ah oo dhibaato u geystay deegaanka Ceel-huur